AmaJamani athi auf Wiedersehen ukubamba kunye nokubamba izandla kwihlabathi elitsha le-post-COVID
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamani zokuPhula » AmaJamani athi auf Wiedersehen ukubamba kunye nokubamba izandla kwihlabathi elitsha le-post-COVID
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Education • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
AmaJamani athi auf Wiedersehen ukubamba kunye nokubamba izandla kubomi obutsha be-post-COVID.
Usulelo lwe-COVID-19 eJamani lwenyuke lwaya kutsho phezulu kwiveki ephelileyo, ngaphandle kokuphunyezwa kwemithetho engqongqo eyonyusa uxinzelelo kubahlali ukuba bagonywe.
Abantu base-Hesse baya kuqhubeka nokuyeka ukwanga abo babathandayo nasemva kokuphela kobhubhani we-coronavirus.
Uninzi lwabantu ekwaxoxwa nabo luthe alusayi kuphinda bababambe ngesandla abantu abangabaziyo.
Phantse ikota yabaphenduli bovavanyo abasayi kuphinda bameme iindwendwe kumakhaya abo nasemva kobhubhane.
Kuhlolisiso lwakutshanje, phantse isinye kwisithathu sabahlali belizwe laseJamani iHessen, bathi basazoqhubeka nokuyeka ukwanga abantu babo ababathandayo. Uvoto lubonise ukuba iipesenti ezingama-39 zama-Hesse nazo ziyakuyeka ngokusisigxina ukubambana izandla nabani na, kwaye iipesenti ezingama-64 azisayi kuphinda zixhawulane nabantu abangabaziyo, nasemva kokuba ubhubhani we-COVID-19 uphelile.
Phantse ikota yamaJamani avavanyiweyo, okanye ama-23%, athi abafuni kumema iindwendwe kumakhaya abo kubomi basemva kobhubhani.
Iziphumo zovavanyo zipeyinta unxunguphalo olumfiliba lweziphumo ezihlala zihleli ubhubhani we-COVID-19 oya kuba nazo kunxibelelwano olusisiseko lwabantu, kubandakanya nokubonakalisa uthando kwabo babathandayo.
Uphando luye lwabonisa ukuba i-46% yabaphenduli be-1,000 abayi kuphinda baye kwiikonsathi, iimuvi okanye ezinye iziganeko ezinkulu zangaphakathi.
Kwaye iipesenti ezingama-40 zabaphenduli bathi bajonge ukuqhubeka benxibe iimaski zotyando kwezinye iimeko, njengaxa bekhwele ibhasi okanye bethenga kwivenkile enkulu, nasemva kokuba ubhubhani we-COVID-19 uphelile.
Amagosa esixeko eGelnhausen, idolophu yaseHessian emalunga neekhilomitha ezingama-40 kwimpuma Frankfurt, bazirhoxisile izicwangciso zentengiso yeKrisimesi yalo nyaka ngenxa yokunyuka kosulelo lwe-Covid-19. “Sizisola kakhulu, kodwa asinakuphendula ngesiganeko esinje ngokubona ubuninzi bezehlo,” utshilo uSodolophu uDaniel Christian Glockner.
Usulelo lwe-COVID-19 kwi Jemani inyuke yaya kutsho kwirekhodi eliphezulu kwiveki ephelileyo, ngaphandle kokuphunyezwa kwemithetho engqongqo ethe yanyusa uxinzelelo kubahlali ukuba bafumane ugonyo.
Nangona kunjalo, iinzame zokunciphisa azibanga nampumelelo kwaphela. Umzekelo, kuqikelelwa ukuba abantu abangama-24 baye bosulelwa yi-COVID-19 kwikonsathi yekwayala yamva nje eFreigericht, nangona ababukeli abangagonywanga bebevaliwe ukuba baye.
Novemba 13, 2021 kwi-00: 55
Sele imalunga nonyaka ukusukela oko kwaboniswa ukuba ukuxhawulana akusasazeki i-covid. Ndicinga ukuba amaJamani ngabafundi abacothayo.